DAWLADDA SHIINAHA OO DAGAAL KU QAADDAY MEHERADO GANACSI OO LA BAXAY MAGACYO AY KA MID YIHIIN ‘XAASKAYGAAN KA BAQAYAA’ IYO ‘MAXAAD EEGAYSAA’ | Saxil News Network
DAWLADDA SHIINAHA OO DAGAAL KU QAADDAY MEHERADO GANACSI OO LA BAXAY MAGACYO AY KA MID YIHIIN ‘XAASKAYGAAN KA BAQAYAA’ IYO ‘MAXAAD EEGAYSAA’
August 28, 2017 - Written by cali abdilaahi
Beijing(Saxilnews.com)-Masuuliyiinta dalka Shiinaha ayaa bilaabay ol’ole ay kula dagaalamayaan magacyo yaab leh oo ay shirkadaha ganacsiga qaarkood la baxayaan. Magacyada illaa hadda shirkado iyo meherado kala duwan loo bixiyey ee sababay in dawladdu ay diiddo waxaa ka mid ah kuwo marka afsoomaali loo rogo noqonaya,“Shirkadda Xaaskaygaan ka baqayaa” iyo “Maxaad eegaysaa” Waxa kale oo magacyadan ka mid ah kuwo macne diiniya ama siyaasi ah wata.
War uu Geeska Afrika ka soo xigtay Al-Carabiya ayaa sheegaya in magacyadan qaar ka mid ahi ceeb dhinaca sharciga ah keenayaan, kuwana dhaqan xumo yihiin, halka kuwo kalana diimaha oo dalkaas aan laga ogolayn la xidhiidhaan. Wargeyska Legal Daily oo ka warrama arrimaha sharciga oo arrintan ka warramay ayaa magacyadaas qaarkood oo uu sheegay waxaa ka mid ah, “Shirkadda Xaaskaygu waa ta ugu weyn (Ganacsiga) qalabka Korontada” iyo shirkad adeegga internet ka bixisa oo isku magacowday, “Adigu Fawdo ayaad raadinaysaa”
Hore ayaa madaxweynaha dalka Shiinaha Shi Jiingbiing (Xi Jinping) ayaa sannadkii 2014 dadkiisa ugu baaqay in ay iska daayaan in ay guryahooda u dhisaan nashqado qalaad oo dalka ku soo kordhayey. Waxaa iyaduan xusid mudan in dhismaha cusub ee talefishanka dawladda Shiinaha CCTV dhowaan loo dhisay oo ah qaab surwaal dheer oo kale ah, in uu dadka dalkaas dacaayad iyo xaqiraad badan kala kulmay.